Doorashada nooc hay'ad ganacsi yar - Amjambo Africa
Doorashada nooc hay’ad ganacsi yar
Mid ka mid ah tillaabooyinka ugu horreeya ee lagu bilaabayo ganacsi cusub ayaa ah go’aaminta nooca hay’ad ee ganacsigu noqon doono. Kani waa qaab dhismeedka meheradda, ee ma aha badeecadaha ama adeegyada ay bixin doonto. Go’aankani aad buu muhiim ugu yahay milkiilayaasha meheradaha doonaya, maadaama uu saamayn doono hawl-maalmeedka, canshuuraha, deymaha, iyo xataa habka dalbashada deynta. Sadex ka mid ah qaab dhismeedka hay’adaha ganacsiga ee ugu caansan waa lahaansho gaar ah, iskaashi guud, iyo shirkado mas’uuliyad xadidan leh. Qaar ka mid ah faa’iidooyinka iyo qasaarooyinka mid kasta ayaa hoos lagu sharxay.
• ee Maraykanka, 73% dhammaan meheradaha yaryar waa iskaa u gaar ah. Kani waa meherad la sameeyay, maamulay, oo uu gacanta ku hayo hal qof. Dhismaha kuma lug laha talaabo sharci oo lagama maarmaan ah dawladda gobolka Maine.
• Diyaarinta cashuurta waa la fududeeyay. Ma jiro kala sooc sharci oo u dhexeeya milkiilaha meheradda iyo meheradda, sidaa darteed dhammaan dakhliga ganacsiga waxaa lagu soo wargeliyaa canshuur celinta shaqsiyeed ee milkiilaha. Tan waxaa loo yaqaan cashuur dhaafis.
• Mulkiilaha kaligiis ah ayaa inta badan si sahlan loo maareeyaa marka loo eego noocyada kale ee hay’adaha, iyada oo aysan jirin milkiileyaal kale, daneeyayaal, ama xubnaha guddiga oo la tashanaya marka ay go’aaminayaan
• Mulkiilaha kaligiis ah ayaa inta badan si sahlan loo maareeyaa marka loo eego noocyada kale ee hay’adaha, iyada oo aysan jirin milkiileyaal kale, daneeyayaal, ama xubnaha guddiga oo la tashanaya marka ay go’aaminayaan.
• Helitaanka amaahda ganacsigu way adkaan kartaa
Part Iskaashiga Guud
Shuraakadu waxay aad ugu eg yihiin iskaashatooyinka gaarka ah, hase yeeshee iskaashigu wuxuu leeyahay laba ama ka badan oo milkiileyaal ah. Ma jiro wax tallaabo sharci ah oo loo baahan yahay si loo bilaabo iskaashi Maine, taas oo ka dhigaysa mid fudud in la furo marka loo eego inta badan hay’adaha kale ee ganacsiga.
• Milkiilayaasha meheraddu waxay u baahan yihiin oo kaliya inay helaan ruqsadaha iyo ruqsadaha deegaanka si ay u bilaabaan. Qaybta Jawaabaha Ganacsiga Maine ee mareegaha Gobolka Maine ayaa taxaya oggolaanshaha iyo ruqsadaha loo baahan yahay. Ama ganacsatadu waxay wici karaan (800) 872-3838.
• Dakhliga meheraddu wuu qaybsamaa waxaana lagu soo wargeliyaa mid kasta oo ka mid ah soo -celinta canshuurta lamaanaha, si loo fududeeyo hannaanka xaraynta.
• Khilaafku wuxuu sababi karaa in ganacsigu fashilmo. Waxaa muhiim ah in la sameeyo heshiis iskaashi si loo sharciyeeyo sida macaashku u qaybsamo, sida khilaafaadka loo maareeyo, loona faahfaahiyo saadka kale ee muhiimka ah ee ganacsiga.
• Sida shirkad gaar ah, shuraakada ganacsigu waxay mas’uul ka yihiin dhammaan deymaha iyo deymaha ganacsiga.
• Helitaanka amaahda ganacsigu way adkaan kartaa.
Shirkadda Xaddidan ee Xaddidan (LLC)
Ragga leh milkiilayaasha meheradaha yaryar ee doonaya rabitaanka dabacsanaanta shuraakada ama lahaanshaha gaarka ah, laakiin doonaya ilaalinta mas’uuliyadda ama urur weyn, LLC waxay noqon kartaa doorasho wanaagsan.
• Ka sokow ruqsadaha iyo ruqsadaha, LLC waxay u baahan tahay in laga diiwaangeliyo gobolka. Tani waxay keenaysaa dhowr khidmadood oo xereyn. Liiska buuxa ee foomamka iyo khidmadaha loo baahan yahay, wac (800) 872-3838
• LLC-yada waxay u baahan yihiin dayactir iyo kharash joogto ah.
Liiska buuxa ee dhammaan noocyada hay’adaha ganacsiga, ganacsatadu waxay booqan karaan bogga dhismayaasha ganacsiga ee websaydka IRS.
PreviousInaad shaqaale tahay iyo inaad yeelato ganacsi kuu gaar ah
NextCaymiska ganacsiyada yaryar